Galoolanka maarta ka sameeysan waa waxyaalaha uur-qaadista laysaga ilaaliyo. Qaar dumarka Gobolka Skåne ku nool waxaa loo geliyay galoolanka maarta ka sameeysan, kaasoo goor dambe la shaacbixiyay in uu cillad leeyahay.
Shaybaarka kansarka ku dhaca qanjirka kaadihaysta ragga ku nool Gobolka Skåne ee joogtada ah
Regelbunden testning för prostatacancer i Skåne - andra språk - somaliska
Rag miyaa tahay, da'daaduna ma u dhaxayaa qonton ilaa lexdan iyo sideed sano? Xaaladdas waxaa lagu siinaayaa fursadda inaad shaybaar iska qaado, kaasoo xiriir la leh cudurka kansarka ku dhaca qanjirka kaadihaysta ragga. Waxaa laga qaadi doonaa shaybaarka dhiigga kaasoo loo yaqaanno [PSA-prov]. Shaybaarka loo yaqaanno [PSA-prov] waxaa lagu xaqiijin karaa haddii uu kansarka qanjirka kaadihaysta ragga kugu dhacay iyo in kale.
Baaritaanka xaaladda xididka hawlbawlaha wayn ee lagu qaban doono Skåne
Undersökning av stora kroppspulsådern i Skåne - somaliska
Haddii aad degan tahay Skåne, oona aad buuxsan doonto 65 sano, waxaa lagugu yeeri doonaa baaritaanka xaaladda xididka hawlbawlaha wayn dartiisa. Baaritaanka xaaladda waxaa lagu shaacbixin doonaa haddii hawlbahlahaaga ay leeyihiin hud/erniya. Huda/erniyada waxay noqon kartaa halis waxayna sababi kartaa dilaaca xididka hawlbawlaha. Sidaas awgeed, wuxuu baaritaanka xaaladda suurtagelin doonaa shacbixinta jiritaanka cillada noocaas ah.